ကျော်ကို၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺သည်( ၂၀၁၁ )ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ(၉)ရက်နေ့တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်အတွင်းသို့ရောက်ရှိလာကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများသည်(လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ) ကင်းကွာပြီး စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်တရားဓမ္မများကို(ရှာဖွေ၊ဆွေးနွေး၊လေ့လာ၊)နိုင်ကြပါစေသတည်း။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိကြကုန်သော... ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ... အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ... ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအားလုံး... ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားလုံးကိုယ်စား... ကျွန်တော်တို့ (Buddhismworld's Admins) မှ ... ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှ လူသားများအားလုံးနှင့် (၃၁)ဘုံတွင်ရှိကြကုန်သော... သတ္တ၀ါအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာကြပါစေ... သတ္တ၀ါတိုင်းတရားကိန်းငြိမ်းအေးနိုင်ကြပါစေ...
Facebookကိုသွားပြီးမျှဝေရန် မျှဝေရန်..မိတ်ဆွေထံသို့ Tweet
ဒီနေရာမှ ဓါတ်ပုံထည့်မည်.(ဓါတ်ပုံများကိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့သက်ဆိုင်မှသာခွင့်ပြုမည်။ )
76 Comments 48 Likes
24 Comments 35 Likes
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်ကျော်ကို's ၏ 'ဓမ္မ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ကလေးတို.ဆရာမ replied to ကျော်ကို's discussion 'မတော်လောဘရဲ့အမာရွတ်'
"ဝိပဿ နာ တရားများများထိုင်-များများ မှတ် ရမှာဖြစ်ပါတယ်"
ကလေးတို.ဆရာမ liked ကျော်ကို's discussion မတော်လောဘရဲ့အမာရွတ်
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး replied to ကျော်ကို's discussion 'မတော်လောဘရဲ့အမာရွတ်'
"စတည်းက အမာရွတ်မဖြစ်အောင်နေနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်မှာပါ ဖြစ်လာပြီဆိုတော့လဲ နောက်ထပ် ထပ်မဖြစ်အောင် နေနိုင်တာအကောင်းဆုံးပါ ဖြစ်ပြီးသားအမာရွတ် ပျောက်ဖို့က တရားအလုပ်များများအားထုတ်နိုင်ပါစေ"
phyuthi သည်ကျော်ကိုကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ယနေ့မှာကျရောက်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည် ကောင်းမွန်သော လိုအင်ဆန္ဒများ အားလုံးပြည့်စုံပြီး လိုချင်သော ပန်းတိုင်ကို အရောက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ မိသားစုမှ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။"
ashinkovida replied to ကျော်ကို's discussion 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ..လူငယ်စကားဝိုင်း..။'
"ကိုရဲလေးစဉ်းစားတာကောင်းပါတယ် မြတ်စွာဘုရားကအဲဒီထက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေလည်းဟောခဲ့ပါသေးတယ် အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ တရားတွေကိုဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ကြဘူးလေ ဒီကမ္ဘာမှာမြတ်စွာဘုးရားထက်ပိုပြီးကိုးကွယ်အားထားရာမရှိတော့ပါဘူး..........."
မေ 18, 2013
"ကလေးတို့ဆရာမပြောတာဟုတ်ပါတယ် သီလဆိူတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်တော့ အခြေခံကျင့်သုံးရမယ့်တရားပါပဲ အခြေခံသီလလောက်မှမလုံခြုံဘူးဆိုရင် တရားရဖို့ဘယ်လွယ်မှာလဲနော် တရားအားထုတ်ကြမယ့်သူတွေအတွက်သီလဟာဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာလေးလဲဆွေးနွေးသင့်တယ်နဲ့တူတယ်"
Zaw Naing Tun replied to ကျော်ကို's discussion 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ..လူငယ်စကားဝိုင်း..။'
"ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ သာမာန်လူပိန်းအတွေးနဲ့ သိနေတာကတော့ ကြောက်စရာတစ်ခုခုကြုံလာရင် ဘုရားကိုသတိရတယ်။ ဘုရားကိုဦးချတာကလည်း ကြောက်လို့ အားကိုးရှာလိုက်တာပါ။ ဆင်းရဲမှာကြောက်လို့ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဘုရားရှိခိုးတိုင်း ဆုတောင်းကို အဓိကထားပြီး ရှိခိုးနေကြတာပါ။…"
ဆန္ဒမောင် replied to ကျော်ကို's discussion 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ..လူငယ်စကားဝိုင်း..။'
"မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဆွေးနွေးဝိုင်းကိုဒီနေ့မှစတင်ရောက်ရှိတာပါ"
ကိုကျော်သန်း replied to ကျော်ကို's discussion 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ..လူငယ်စကားဝိုင်း..။'
"ဒယ်အိုးကြောက်ရင် ကုသိုလ်များများ လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ။ အဲတာဆီု အပါယ်လွတ်မှာတဲ့လား"
"ကုိယ်သာနာ ရု စီတ်မနာစေနင့် ကြိုးစဲာခြင် အောင်မြင်ခြင်ရ လမ်စပဲ"
"အချိန်တွေ အလကားမဖြစ်ရင်တော့ ပိုကောင်းတယ်"
THAT HTUN OO replied to ကျော်ကို's discussion 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ..လူငယ်စကားဝိုင်း..။'
lwin replied to ကျော်ကို's discussion 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ..လူငယ်စကားဝိုင်း..။'
"မှန်တယ်ကိုမျိုးနိုင်ရေ အခုတိုက်တွန်းတဲ့ အတွက် အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ"
"အခုလိုဆွေနွေတာ သိပ်ကောင်းပါတယ် .."
aung hein replied to ကျော်ကို's discussion 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ..လူငယ်စကားဝိုင်း..။'
"်ွဒယ်အိုးကြောက်ရင် ကုသိုလ်များများ လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ။"
naynay replied to ကျော်ကို's discussion 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ..လူငယ်စကားဝိုင်း..။'
"ပထမတော့ ရိုသေတတ်အောင် ရိုင်စီုင်းတာတွေ ပပြောက်အောင် အမှန်တိုင်းမြင်အောင် ရှောင်တတ်တိန်တတ်အောင် ဆင်းရဲတာတွေလွတ်ပြီး ချမ်းသာခြင်းတွေ တွေရှိအောင် ကီုးကွယ် စည်းကပ်ရခြင်ဖြစ်တယ် ။ဆင်ရဲခြင်လွတ်အောင် တရာကုိအာထုပ်ဖိုသာ ကိုတာဝန်ဖြစ်တော့သည်။"
ဤနေရာသည် ဗုဒ္ဓဘုရား၏ မေတ္တာရိပ်အောက်တွင် တည်ရှိပါသောကြောင့် ရောက်လာသူများအားလုံး အေးချမ်းသာယာကြပါစေ။
Started Mar 28, 20120Replies0Likes
(၁) ကိလေသာအညစ်အကြေးတိုိ့ စင်ကြယ်စေနိူင်ခြင်း၊ (၂)စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်းသောကကို လွန်မြောက် ပယ်ခွါစေနိူင်ခြင်း (၃)ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းပရိဒေ၀ကို လွန်မြောက်ပယ်ခွါစေနိူင်ခြင်း၊(၄) ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကို…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
မတော်လောဘရဲ့အမာရွတ်
Started this discussion. Last reply by ကလေးတို.ဆရာမ Jun 18, 2015. 19 Replies 1 Like
မတော်လောဘနဲ့ ရတဲ့ ပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ခဏဟာမီးလောင်စပြုနေတဲ့ အက်ျီတစ်ထည်ဝတ်ထားရသလိုပါပဲ..၀တ်ထားတဲ့ အချိန်မှာလည်းပူလောင်နေတယ်...မီးလောင်ပြီးမြန်မြန်ကုန်သွားတယ်..ပြီးတော့ လည်း အမာရွတ်ကျန်ခဲ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by ကျော်ကို Jan 7, 2012.9Replies 1 Like
ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာညီအကိုမောင်နှမများခင်ဗျာ...။ရတနာ သုံးပါးကိုပူဇော်ကြတဲ့ အခါဘုရားနဲ့ သံဃာကိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်တော်များများပူဇော်တတ်ကြပါတယ်.. တရား(ဓမ္မ)ကိုတော့ ဝိပဿနာအားထုတ်မှသာပူဇော်ရာရောက်လို…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by ashinkovida မေ 18, 2013. 106 Replies 8 Likes
ရောက်လာသူအားလုံးမဂ်လာပါခမျာ..။ကျနော်တို့ အားလုံးသိချင်တာတွေသိရဖို့ ၊ဓမ္မအမြင်ကျယ်လာဖို့ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဒဘာသာအယောင်ဆောင်သာသနာဖျက်တွေရဲ့ အယူမှား တွေ ရှင်းထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ဒီဘလော့ကို ဇန်န၀ါရီ 8, 2012 တွင်4:52pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။5Comments3Likes
ဒီဘလော့ကို ဇန်န၀ါရီ 2, 2012 တွင်4:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments2Likes
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 29, 2011 တွင်1:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။6Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 28, 2011 တွင်3:24pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 24, 2011 တွင်1:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။6Comments0Likes
You need to beamember of ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺ to add comments!
9:57pm အချိန်ှဧပြီ 24, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ယနေ့မှာကျရောက်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည်
ကောင်းမွန်သော လိုအင်ဆန္ဒများ အားလုံးပြည့်စုံပြီး
လိုချင်သော ပန်းတိုင်ကို အရောက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ မိသားစုမှ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
11:59pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 12, 2012, တွင် phyoewaihtun မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:55am အချိန်ဇွန် 6, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကျောက်မဲးကသူတွေ ကျောက်ဖြူ သွားနေကြတယ်ထင်တယ်
6:56am အချိန်မေ 28, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
Friends18.com Rose Scraps
1:22am အချိန်မေ 19, 2012, တွင် သဒ္ဓါဖြူ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မောင်လေးရေ မမလဲလာလည်သွားပါတယ်ရှင် လက်ဆောင်လေးထားခဲ့တယ်နော်။
6:58am အချိန်မေ 3, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မင်္ဂလာပါ အနီ လာလည်တယ်နော်...
Friends18.com Flowers Scraps
Friends18.com Picture Comments
5:39pm အချိန်ှဧပြီ 24, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကိုကျော်ကိုရေ..မွေးနေ့လေးမှ စလို့..အစစ အဆင်ပြေ အေးချမ်းပါစေ။။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့မင်္ဂလာလေးပါ ...လို့..
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှ ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်..
12:16pm အချိန်ှဧပြီ 24, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မွေးနေ့ မင်္ဂလာပါ ဓမ္မ သွေးရင်း ညီအကို ...ရင်ထဲးဖြစ်ချင်တာ အကုန်ဖြစ်ပါစေဗျာ
3:43am အချိန်ှဧပြီ 24, 2012, တွင် A BuddhismworldAdmin မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
A BuddhismworldAdmin created this Ning Network.
Android phone (ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ)
ငြိမ်းသတ်ရန်လိုသော မီး ၁၁ ပါး။
မိသားစု တစ်စုလုံး ငြိမ်းအေးလိုလျှင်။
သေခြင်းအကြောင်း ၄ မျိုး။
ဘဝ ကောင်း၊ ဘဝဆိုး။
နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာ့ပြည်မှ မြေအမျိုးအစား။
2. ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာဟိအသင်း (၁၇) ကြိမ်မြောက်အလှူပွဲ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ အတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း @@@@@@@@@@@
3. ငါကိုယ်တိုင် သောတာပန် တည်ပြီလား။
4. တစ်ယောက်တည်းငြိမ်းချမ်းအောင်နေနည်း။(ယောဆရာတော်ကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဟောကြား)
5. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် မင်္ဂလမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
6. ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ၏ ဘ၀လှအောင်ပြင်ချင်စိတ်။
8. မိသားစု တစ်စုလုံး ငြိမ်းအေးလိုလျှင်။
zaw moe liked zaw moe's discussion အတက်သိက ဖြေကြားပေးပါဘရား
kyaesinsan သည်thein wai's ၏ 'ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ၏ ဘ၀လှအောင်ပြင်ချင်စိတ်။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Thet Thet Aung shared their blog post on Facebook
ဖိုးကံထူး သည် A BuddhismworldAdmin's ၏ 'ဗုဒ္ဓဘာသာအမေးအဖြေကဏ္ဍ' အဖွဲ့တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဖိုးကံထူး joined A BuddhismworldAdmin's group
ဆရာတော်ဆန်နီနေမင်းနှင့်တကွသံဃာတော်များဖြေကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် မိမိ…See More
142 Comments 42 Likes
ဖိုးကံထူး liked ဖိုးကံထူး's profile
ဖိုးကံထူး သည်thein wai's ၏ 'တစ်ယောက်တည်းငြိမ်းချမ်းအောင်နေနည်း။(ယောဆရာတော်ကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဟောကြား)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဖိုးကံထူး သည်Thet Thet Aung's ၏ 'အချိန်၃မိနစ်ပေးဖတ်ပါ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဖိုးကံထူး သည်hla moe 24ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဖိုးကံထူး သည် thein wai's၏ 'ငါကိုယ်တိုင် သောတာပန် တည်ပြီလား။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဖိုးကံထူး သည် phyuthi's၏ 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာဟိအသင်း (၁၇) ကြိမ်မြောက်အလှူပွဲ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ အတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း @@@@@@@@@@@'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဖိုးကံထူး သည်phyuthi's ၏ 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာဟိအသင်း (၁၇) ကြိမ်မြောက်အလှူပွဲ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ အတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း @@@@@@@@@@@' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
© 2017 Created by A BuddhismworldAdmin. Powered by